သွားရောက်စားသောက်သင့်သော ရန်ကုန်မှ Asian စားသောက်ဆိုင်များ - ဒိုးမယျ
အာရှအစားအစာ တျောတျောမြားမြားက ဗမာလူမြိူးတို့ရဲ့ပါးစပျနဲ့ တျောတျောလေး အစပျအဟပျတညျ့ပါတယျ။
နောကျပွီး အာရှစားသောကျဆိုငျတှကေ နရောတကာနီးပါးမှာရှိပါတယျ။
ဒီဆောငျးပါးမှာ လမျးညှနျပေးမဲ့ အာရှအစားအစာဆိုငျတှကေတော့ နညျးနညျးလေး စြေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပေးရတဲ့ စြေးနဲ့တနျတဲ့ဆိုငျတှပေါ။ အစားအစာ ပမာဏလညျး မြားပါတယျ။ လခထုတျရကျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုပွုစုတဲ့ အနနေဲ့ ဆုခသြငျ့ပါတယျနျော။
နောကျပွီး မိသားစုနဲ့လညျးသှားဖို့လညျး အဆငျပွတေဲ့ဆိုငျတှပေါ။ နရောကယျြပွီး စားရသောကျရတာ သကျတောငျ့သကျသာရှိလို့ပါ။
ကဲ…. ဒါဆိုရငျ ဆကျပွီးတော့ ဘယျဆိုငျလေးတှလေညျး ဆကျပွီးဖတျကွညျ့လိုကျကွပါနျော။
မွနျမာလူမြိူးတို့ အကြှမျးတဝငျရှိတဲ့ အိန်ဒိယ အစားအစာနဲ့ပဲ အစပြိူးပါရစနေျော။
မွနျမာပလာဇာအပျေါဆုံးထပျမှာရှိပွီးတော့ စြေးကတော့ ပေးရတဲ့ အရသာနဲ့တျောတျောလေး တနျပါတယျ။ တကယျ့ကို အန်ဒိယအစားအစာရဲ့ အရသာအစဈကို ခံစားလို့ရပါတယျ။ ဆိုငျအပွငျအဆငျ နဲ့ လာခပြေးတဲ့ ပနျးကနျပုံစံတှကေ သကျသပွေမှာပါ။ နံပွားစဈစဈ ဆိုတာ ဒီဆိုငျမှာရပါတယျ။ ကွကျသားထောပတျဟငျးနဲ့ စမူဆာကတော့ လုံးဝကိုမှာစားရမှာပါ။
ကမ်ဘာအေးလမျးမကွီး စူပါဟိုတယျရဲ့ အောကျဆုံးထပျမှာ ဖှငျ့ထားတာပါ။ ဂပြနျအစားအစာရဲ့ တကယျ့ အရသာအစဈ အပွငျ ဒီဆိုငျက ဆာရှိမီတှေ မှာ သုံးတဲ့ ဆယျလမှနျ၊ တူနာ အစရှိတဲ့ ငါးတှကေ လုံးဝ လတျဆတျပွီး ပထမတနျးစားပါပဲ။ နောကျတဈျခုက ဒီဆိုငျမှာ သူတို့ကိုယျပိုငျ တံဆိပျနဲ့ ထုတျတဲ့ ဘီယာရှိပါတယျ။ အရမျးကို သောကျလို့ကောငျးပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှား အစားအစာတှေ သီးသနျ့ရောငျးတဲ့ဆိုငျလေးပါ။ တျောဝငျစငျတာမှာ ရှိပါတယျ။ ရနျကုနျမှာ အငျဒိုနီးရှားစားသောကျဆိုငျဆိုတာ လကျခြိူးရလေို့ရပါတယျ။ ဒီဆိုငျရဲ့ အရသာကတော့ လုံးဝ အငျဒိုနီးရှားအစဈလကျရာလိုခံစားရစမှောပါ။ ကွကျကွျောလေးကို စမျးစားကွညျ့လိုကျပါ။ သိသှားပါလိမျ့မယျ။
တောငျပိုငျးတရုတျပွညျရဲ့ အစားအစာတှကေို စားကွညျ့ခငျြရငျတော့ ဒီဆိုငျကိုသှားသငျ့ပါတယျ။ Junction Square မှာဖှငျ့ထားတာပါ။ ဖကျထုပျရဲ့ အရသာကလုံးဝအံ့မခနျးပါပဲ။ လကျလုပျခေါကျဆှဲ တှကေိုလညျး စားကွညျ့ပါ။ အရသာမြိူးစုံရှိလို့ ခေါကျဆှဲကိုပုံစံမြိူးစုံ စားလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့သတိထားပါ။ တဈပှဲကို လူသုံးယောကျ မနညျးကုနျအောငျစားရပါတယျ။ အခြိူပှဲလေးတှလေညျးမှာစားကွညျ့ပါ။ စာရေးသူကတော့ နှမျးကပျပနျကိတျလေးကိုကွိုကျပါတယျ။
ထိုငျးစားသောကျဆိုငျအစဈဆိုတာ ဒီဆိုငျပါပဲ။ မူပငျးလို့ချေါတဲ့ ဝကျသားပွားကငျကတော့ လုံးဝ ဘနျကောကျကအရသာတှလေိုပါပဲ။ ကှသေ့ယိုလေးကလညျး တကယျကိုအရသာရှိပါတယျ။ အိမျတိုငျရာရောကျလညျးပို့ပေးတယျနျော။ နောကျပွီး ဆိုငျရဲ့အပွငျအဆငျကလညျးတကယျ ထိုငျးစတိုငျပါ။ ကြောကျကုနျး အောငျဇယေလြမျးမပျေါမှာ ရှိပါတယျ။
ရနျကငျးမွို့နယျ သစ်စာလမျးမပျေါမှာ တညျရှိပွီးတော့ စငျကာပူအစားအသောကျ တှကေို အရသာရှိရှိနဲ့ စားနိုငျပါတယျ။ ကွကျဆီထမငျးကတော့ ရှယျပါပဲ။ နောကျပွီး ဖြျောရညျကောငျးကောငျးလေးတှလေညျးရပါတယျ။
ကိုရီးယားအစားအသောကျ တှကေို ကိုရီးယားနိုငျငံမှုာ စားနသေလိုခံစားရစမှောပါ။ ဝကျသားကငျကတော့ စာရေးသူအကွိုကျပါပဲ။ ရှတေောငျကွား ကမ်ဘောဇလမျး အမှတျ၁၅ ပါ။
ခုလောကျဆို အာရှတဈခှငျလညျး တျောတျောလေးကို စုံသလောကျရှိနပေါပွီ။
ပရိသတျကွီးရေ ….. အမြားကွီးဆကျမရေးတော့ဘူး။
လကုနျရငျ ပျိုကျဆံပိုကျပွီးသာ ပတျစားပါတော့ရှငျ။
အာရှအစားအစာ တော်တော်များများက ဗမာလူမျိူးတို့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ တော်တော်လေး အစပ်အဟပ်တည့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အာရှစားသောက်ဆိုင်တွေက နေရာတကာနီးပါးမှာရှိပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ လမ်းညွှန်ပေးမဲ့ အာရှအစားအစာဆိုင်တွေကတော့ နည်းနည်းလေး ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့တန်တဲ့ဆိုင်တွေပါ။ အစားအစာ ပမာဏလည်း များပါတယ်။ လခထုတ်ရက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုစုတဲ့ အနေနဲ့ ဆုချသင့်ပါတယ်နော်။
နောက်ပြီး မိသားစုနဲ့လည်းသွားဖို့လည်း အဆင်ပြေတဲ့ဆိုင်တွေပါ။ နေရာကျယ်ပြီး စားရသောက်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိလို့ပါ။
ကဲ…. ဒါဆိုရင် ဆက်ပြီးတော့ ဘယ်ဆိုင်လေးတွေလည်း ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။
မြန်မာလူမျိူးတို့ အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယ အစားအစာနဲ့ပဲ အစပျိူးပါရစေနော်။
မြန်မာပလာဇာအပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိပြီးတော့ ဈေးကတော့ ပေးရတဲ့ အရသာနဲ့တော်တော်လေး တန်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အန္ဒိယအစားအစာရဲ့ အရသာအစစ်ကို ခံစားလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင် နဲ့ လာချပေးတဲ့ ပန်းကန်ပုံစံတွေက သက်သေပြမှာပါ။ နံပြားစစ်စစ် ဆိုတာ ဒီဆိုင်မှာရပါတယ်။ ကြက်သားထောပတ်ဟင်းနဲ့ စမူဆာကတော့ လုံးဝကိုမှာစားရမှာပါ။
ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီး စူပါဟိုတယ်ရဲ့ အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဖွင့်ထားတာပါ။ ဂျပန်အစားအစာရဲ့ တကယ့် အရသာအစစ် အပြင် ဒီဆိုင်က ဆာရှိမီတွေ မှာ သုံးတဲ့ ဆယ်လမွန်၊ တူနာ အစရှိတဲ့ ငါးတွေက လုံးဝ လတ်ဆတ်ပြီး ပထမတန်းစားပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီဆိုင်မှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်တဲ့ ဘီယာရှိပါတယ်။ အရမ်းကို သောက်လို့ကောင်းပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား အစားအစာတွေ သီးသန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ တော်ဝင်စင်တာမှာ ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အင်ဒိုနီးရှားစားသောက်ဆိုင်ဆိုတာ လက်ချိူးရေလို့ရပါတယ်။ ဒီဆိုင်ရဲ့ အရသာကတော့ လုံးဝ အင်ဒိုနီးရှားအစစ်လက်ရာလိုခံစားရစေမှာပါ။ ကြက်ကြော်လေးကို စမ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ သိသွားပါလိမ့်မယ်။
တောင်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ အစားအစာတွေကို စားကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီဆိုင်ကိုသွားသင့်ပါတယ်။ Junction Square မှာဖွင့်ထားတာပါ။ ဖက်ထုပ်ရဲ့ အရသာကလုံးဝအံ့မခန်းပါပဲ။ လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲ တွေကိုလည်း စားကြည့်ပါ။ အရသာမျိူးစုံရှိလို့ ခေါက်ဆွဲကိုပုံစံမျိူးစုံ စားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သတိထားပါ။ တစ်ပွဲကို လူသုံးယောက် မနည်းကုန်အောင်စားရပါတယ်။ အချိူပွဲလေးတွေလည်းမှာစားကြည့်ပါ။ စာရေးသူကတော့ နှမ်းကပ်ပန်ကိတ်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်အစစ်ဆိုတာ ဒီဆိုင်ပါပဲ။ မူပင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဝက်သားပြားကင်ကတော့ လုံးဝ ဘန်ကောက်ကအရသာတွေလိုပါပဲ။ ကွေ့သယိုလေးကလည်း တကယ်ကိုအရသာရှိပါတယ်။ အိမ်တိုင်ရာရောက်လည်းပို့ပေးတယ်နော်။ နောက်ပြီး ဆိုင်ရဲ့အပြင်အဆင်ကလည်းတကယ် ထိုင်းစတိုင်ပါ။ ကျောက်ကုန်း အောင်ဇေယျလမ်းမပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။
ရန်ကင်းမြို့နယ် သစ္စာလမ်းမပေါ်မှာ တည်ရှိပြီးတော့ စင်ကာပူအစားအသောက် တွေကို အရသာရှိရှိနဲ့ စားနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဆီထမင်းကတော့ ရှယ်ပါပဲ။ နောက်ပြီး ဖျော်ရည်ကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းရပါတယ်။
ကိုရီးယားအစားအသောက် တွေကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှုာ စားနေသလိုခံစားရစေမှာပါ။ ဝက်သားကင်ကတော့ စာရေးသူအကြိုက်ပါပဲ။ ရွှေတောင်ကြား ကမ္ဘောဇလမ်း အမှတ်၁၅ ပါ။
ခုလောက်ဆို အာရှတစ်ခွင်လည်း တော်တော်လေးကို စုံသလောက်ရှိနေပါပြီ။
ပရိသတ်ကြီးရေ ….. အများကြီးဆက်မရေးတော့ဘူး။
လကုန်ရင် ပိုက်ဆံပိုက်ပြီးသာ ပတ်စားပါတော့ရှင်။